yarzartun: March 2016
system font ကိုချိန်းချင်သူများအတွက်✔ASOKA Windows System Font Changer✔
Windows တွင် system font ကိုချိန်းချင်သူများအတွက် Asoka Windows Font Changer ကိုထုတ်ပေးလိုက်ပါပြီ။ Folder, Files, Menu Bar, Title Bar & etc... အစရှိသည့် ဖောင့်ဒီဇိုင်းများကိုပြောင်းလဲပေးပါမည်။ ယခု version တွင် ဖောင့် Style လေးမျိုးကိုထည့်ပေးထားပါသည်။ ပါဝင်သောဖောင့်များမှာ Asoka Myanmar Unicode, Myanmar3, Pyidaungsu, Zawgyi တို့ဖြစ်သည်။ Zawgyi သွင်းထား၍ unicode အလုပ်မလုပ်သောကွန်ပတာများတွင် ဤ Software အားအသုံးပြုပြီး Unicode ချိန်းနိုင်သလို windows8, 8.1, 10 တို့တွင်လည်း Unicode အသုံးမပြုချင်ပါက Zawgyi အသုံးပြုလို့ရအောင်လည်းထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။ အသုံးမပြုချင်တော့ပါကလည်း Restore Default Font ကိုပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်အောင်လည်းထည့်ပေးထားပါသည်။နောက် Version များအတွက် အသုံးပြုချင်သော ဖောင့်ဒီဇိုင်းများကို Command Box တွင်ပြောကြားနိုင်ပါသည်။ ပြောကြားထားသောဖောင့်ကို လည်း download Link ပေးထားရပါမည်ဖြစ်သည်။ အားပေးမူကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အောက်ကလင့်တွင် ရယူနိုင်ပါပြီ။
Windows တှငျ system font ကိုခြိနျးခငျြသူမြားအတှကျ Asoka Windows Font Changer ကိုထုတျပေးလိုကျပါပွီ။ Folder, Files, Menu Bar,
Title Bar & etc... အစရှိသညျ့ ဖောငျ့ဒီဇိုငျးမြားကိုပွောငျးလဲပေးပါမညျ။ ယခု version တှငျ ဖောငျ့ Style လေးမြိုးကိုထညျ့ပေးထားပါသညျ။ ပါဝငျသောဖောငျ့မြားမှာ Asoka Myanmar Unicode, Myanmar3, Pyidaungsu, Zawgyi တို့ဖွဈသညျ။ Zawgyi သှငျးထား၍ unicode အလုပျမလုပျသောကှနျပြူတာမြားတှငျ ဤ Software အားအသုံးပွုပွီး Unicode ခြိနျးနိုငျသလို windows8, 8.1, 10 တို့တှငျလညျး Unicode အသုံးမပွုခငျြပါက Zawgyi အသုံးပွုလို့ရအောငျလညျးထညျ့သှငျးပေးထားပါသညျ။ အသုံးမပွုခငျြတော့ပါကလညျး Restore Default Font ကိုပွနျလညျအသုံးပွုနိုငျအောငျလညျးထညျ့ပေးထားပါသညျ။နောကျ Version မြားအတှကျ အသုံးပွုခငျြသော ဖောငျ့ဒီဇိုငျးမြားကို Command Box တှငျပွောကွားနိုငျပါသညျ။ ပွောကွားထားသောဖောငျ့ကို လညျး download Link ပေးထားရပါမညျဖွဈသညျ။ အားပေးမူကိုအထူးကြေးဇူးတငျပါသညျ။ အောကျကလငျ့တှငျရယူနိုငျပါပွီ။
Credit >> ASOKA Technologies
2 Comments56 Shares
Posted by dawallay lay at 7:05:00 PM No comments:
ကွန်ပျူတာ desktop ပေါ်တွင် ဗွီဒီယို Record လုပ်မယ် - FastStone Capture 8.4
Saturday, March 26, 2016 ayekyaw No comments
FastStone Capture 8.4 နောက်ဆုံးထွက် Update လေးပါ..။ မိမိ ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာ tutorials, demo videos, save play movies, music and games စသည်တို့ကို capture နဲ့ record လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ FastStone Capture ဆော့ဖ်ဝဲ လေးဖြစ်ပါတယ်။ keyboard shortcuts ကို အသုံးပြုနိုင်သလို automate recording လဲလုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 2.6 MB ရှိပြီး Windows XP / Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10 (32-bit or 64-bit) အထိ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Full Version သုံးရအောင် Keygen ဖိုင် ထည့်ပေး ထားပါတယ်။ အသုံးပြုလိုတဲ့ သူများ အောက်မှာ ဒေါင်းလုဒ် ယူနိုင်ပါပြီ။
Posted in: PC software, Screen Capture, video recording
Posted by dawallay lay at 4:09:00 AM No comments:
ဘာသာစကားအမျိုးပေါင်း ၉၀ကို မြန်မာလိုဘာသာပြန်ပေးနိုင်မယ့် Translate v4.4.0.RC01.104701208 Apk
Sunday, March 27, 2016 လင်း(စွယ်စုံ) No comments
Android OS နှင့် Tablet ချစ်သူများအတွက် ဘာသာစကားအမျိုးပေါင်း ၉၀ကို မြန်မာလိုဘာသာပြန်ပေးနိုင်မယ့် Translate v4.4.0.RC01.104701208 Apk လေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Google Translate ကတော့ လူတိုင်းသိပြီးသား ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ၊ ဘာသာစကားအမျိုးအစားပေါင်း 90 အထိ Translate က ဘာသာ ပြန်ပေးနိုင်ပြီး မြန်မာဘာသာစကားကိုပါ Support လုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခု Application မှာတော့ဓါတ်ပုံတွေထဲမှာပါတဲ့ စာတွေကိုပါ ဘာသာပြန်ဆိုပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Translate လုပ်ပေး နိုင်တဲ့ ဘာသာစကားတွေကို အောက်မှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
* Download language packs for when you're traveling, or if your connection is expensive or slow.
Posted in: Andriod applications
Posted by dawallay lay at 12:48:00 AM No comments:
Friday, March 25, 2016 Pyae Phyo (MMiTD) No comments
Posted by dawallay lay at 1:47:00 AM No comments:
iPhone Safari ကနေ ၀က်ဆိုဒ်တွေကြည့်တဲ့အခါ မြန်မာလိုမမြင်ရရင်ပြုလုပ်နည်း
Facebook တွေ Viber တွေ Messsage တွေမှာတော့ မြန်မာစာရနေပြီး
Safari ကနေ မြန်မာဝက်ဆိုဒ်တွေဖတ်ရင် လေးထောင့်တုံးတွေပေါ်ရင်
အောက်က လင့်ကိုနှိပ်ပြီး အဆင့်ဆင့် သွားပြီးလုပ်ပါ နားမလည်ရင်
Video file ထည့်ပေးထားတာမလို့ကြည့်ပြီးလုပ်ရင် အဆင်ပြေပါတယ်
ပြုလုပ်နည်း Video တွေ Code Credit - Saturngod
Posted by dawallay lay at 11:29:00 PM No comments:
wifi၀င်ပြီးသုံးမရရင်ဖြေရှင်းနည်းเน็ตหอเข้าไม่ได้ ขึ้นเครื่องหมายตกใจ มาๆ ดูวิธีแก้
Posted by dawallay lay at 7:44:00 PM No comments:
Post by Kaung Htoo San: iDevice များအား iCloud ရှိ မရှိစစ်ဆေးသင့်
Post by Kaung Htoo San: iDevice များအား iCloud ရှိ မရှိစစ်ဆေးသင့်: iDevice တစ်ခုအားဝယ်ယူတော့မယ်ဆိုရင် အရေးဝကီးဆုံးစစ်ဆေးရမှာကတော့ iCloud သုံးထားခြင်း ရှိ မရှိပါပဲ။ ဘာလို့စစ်ဆေးသင့်လဲဆိုရင် iCloud ကို ...
Posted by dawallay lay at 7:36:00 PM No comments:
ปํญหาโน้ตบุ๊คเล่นหรือเชื่อมต่อWiFiไม่ได้(Windoes7) Ep. 2
၀စ်းဒိုး၇တင်ပြီးwifi သုံးမရလိုတိုင်ပတ်နေသူများအတွက်
Posted by dawallay lay at 11:15:00 PM No comments:
Posted by dawallay lay at 11:11:00 PM No comments:
การแก้ปัญหา Wireless แบบเส้นผมบังภูเขา
Posted by dawallay lay at 10:57:00 PM No comments:
မိုဘိုင်း Hardware ပြုပြင်ရေး စာအုပ်
Android တက်ပလက် ပြုပြင်နည်းစာအုပ်
Backlight မီးပျောက်သောဖုန်းများအား LCD ပြုပြင်နည်း
Forme Keypad ပြုပြင်ခြင်း
Galaxy S4 ပြုပြင်ခြင်း
Huawei Y220t No Power ပြုပြင်ခြင်း
Huawei C8500 Plus UIM Card မဖတ်ခြင်း
Huawei EMMC လဲနည်း
Huawei ETS 2222+ CDMA
G610 No Power
Huawei U8818 Display
Huawei U8825D No Power
No Power Tablet
NOVO7Tablet No Power
Y210 No Power
Posted by dawallay lay at 9:03:00 AM No comments:
GTA V ตอนที่6 : ทำงานกับ Lester มีแต่สบายกับสบาย
Posted by dawallay lay at 8:29:00 PM No comments:
GTA V ตอนที่5: Trevor มาแล้ว!
GTA V ตอนที่ 4: ภารกิจปล้นร้านเพชรสุดเร้าใจ
GTA V ตอนที่3: ไมเคิลผู้น่าสงสาร
Posted by dawallay lay at 8:28:00 PM No comments:
LET PLAY GTA V ตอนที่2: ขโมยรถผิดบ้านสะแล้ว....
Posted by dawallay lay at 8:21:00 PM No comments:
LET PLAY GTA V ตอนที่ 1 : ยินดีต้อนรับสู่เมือง Los Santos!
Posted by dawallay lay at 8:20:00 PM No comments:
အင်တာနက်ဒေါင်းလော့ခ်မန်နေဂျာက Serial ကီးတောင်းနေသလား Click နှစ်ချက်ပဲလိုပါတယ် (IDM 6.25 Build 14)
Sunday, March 13, 2016 ဝင်းကမ္ဘာကျော် No comments
ဒီ IDM ကတော့ Update ထွက်တိုင်း တင်ပေးနေကျဖြစ်တဲ့ Double Click to Install Version ပါ... Patch Crack မသုံးတတ်သူတွေအတွက် အရမ်းကို အဆင်ပြေစေပါတယ်..။
ဒီ Version ကို သုံးမယ်ဆိုရင် အရင်တင်ထားတဲ့ IDM ကို Uninstall (ထုတ်) ပစ်ပြီးမှ သုံးပါ။
First Name & Last Name မှာ ကြိုက်တာရေးထည့်ပြီး Next အဆင့်ဆင့်နဲ့ Install လုပ်ပေးရုံပါပဲ..။
Posted by dawallay lay at 7:30:00 AM No comments:
Posted by dawallay lay at 8:30:00 PM No comments:
Dropbox ကိုသုံးပြီး ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ လက်တော့ တစ်ခု ကိုခြေရာခံခြင်း
10:13:00 am ဘလော့ခရီးသည် No comments
Dropbox ကိုသုံးပြီးပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ကွန်ပျူတာလက်တော့ တစ်လုံးအားခြေရာခံခြင်း.........
မိမိပါတ်ဝင်းကျင်မှာ မိမိ သတိ မထားမိတာလေးတွေ ထောင်သောင်းမက ဘယ်လောက်တောင်
ရှိနေသလဲဆိုတာဒီပိုစ်လေးဖတ်ပြီးသွားရင်သိပါလိမ့် မယ်။တကယ့် ကို ပျော်ရွင်စရာလေးတစ်ခု ပေါ့ ဗျာ။
ပျောက်သွားတဲ့ လက်တော့ တစ်လုံးကိုရှာချင်တယ်ဆိုရင် အလွယ်လေးပါခင်ဗျာ။ကဲအောက်မှာဆက်လေ့ လာပေးစေလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။
မိမိကွန်ပျူတာမှာ Dropbox ကို install လုပ်ပြီးသား sing -up လုပ်ထားပေးပါ။
မိမိကွန်ပျူတာအခိုးခံရလျင် သို့ မဟုတ် ( မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကိုခဏအင်တာနက်ပေးသုံးကြည့် ပါ)
www.Dropbox .com ကိုအွန်လိုင်းမှ sin-in ဝင်လိုက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ ခြေရာခံနိုင်ပါပြီ။
dropbox မှာ setting ကိုသွားပါ။
ဒီပုံကတော့ setting ကိုပြထားတာပါ။
ဒီပုံမှာဆိုရင်တော့ (i) နေရာမှာထောက်လိုက်ရင် (လိပ်စာတွေရပြီနော်)
ဖုန်းအတွက်လည်းလာပါမယ်ခင်ဗျာ (ဖုန်းကတော့ ပိုမိပြီး)သဘောကျလိမ့် မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ မေးခွန်းတွေအများကြီးရှိလာမှာပါ။စဉ်းစားပါခင်ဗျာ ။(ဥပမာ- သူခိုးက ကွန်ပျူတာကို windows ချိန်းလိုက်ရင်ရောဗျာ။ အင်တာနက်မသုံးရင်ရောဗျာ။စသည်ဖြင့် ပေါ့ ဗျာ။) ကျွန်တော့် အနေနှင့် နည်းပညာတစ်ခုအနေနှင့် ပြန်လည်မျှဝေခြင်းသက်သက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
အထက်ဖော်ပြပါအချက်တွေညီညွတ်ခဲ့ ရင်တော့ သင့် ရဲ့ လက်တော့ ဟာပြန်ရနိုင်ပါတယ်။ ဘလော့ခရီးသည်
Posted in: Computer ဆိုင်ရာ
Posted by dawallay lay at 4:12:00 PM No comments:
မားသားဘုတ်ရွှေးနည်း วิธีการเลือก Mainboard, Z170 H170 B150 ต่างกันยังไง? ซื้ออะไรดี?
Posted by dawallay lay at 2:10:00 AM No comments:
PowerISO 6.5 Retail Multilingual (x86x64) Incl Patch (5.54 Mb)
မင်္ဂလာပါ ISO ဖိုင်များကို Extract လုပ်ရန်၊အခြားဖိုင် Formats များကို ISO ဖိုင်အဖြစ်
Archive လုပ်ရန်နဲ့ ISO ဖိုင်များကို CD/DVD,USB တို့မှာ Burn လုပ်နိုင်တဲ့
PowerISO 6.5 နောက်ဆုံးထွက်ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
==>Install setup file x86 (or) x64.
==>Don't launch PowerISO.
==>Run as Admin to Patch and activate.
Posted by dawallay lay at 1:39:00 AM No comments:
ဖောင့်ဒီဇိုင်းများ ကွန်ပျူတာအတွက် အဆင်ပြေအောင် တစ်နေရာထဲကနေ Font ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုး(အားလုံးပေါင်း ၄၅၀ ကျော်)ကို စုပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
password - konyinyi........
nyi nyi font for pc.rar
Posted by dawallay lay at 1:23:00 AM No comments:
ကိုဝင်းကမ္ဘာကျော်ရဲ.နည်းပညာစာအုပ်ပေါင်း၂၀၀ကျော်နဲ.မိတ်ဆက်ပေးပရစေ ကွန်ပျူတာ ၊ Network ၊ Hacking ၊ Photoshop ၊ Android ၊ iPhone နှင့် အခြားနည်းပညာစာအုပ်ပေါင်း (၂၀၀) ကျော်
Friday, January 15, 2016 ဝင်းကမ္ဘာကျော် 8 comments
Photoshop ဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာ စာအုပ်များနှင့် ကွန်ပျူတာ အင်တာနက်ဆိုင်ရာ စာအုပ်များကို အများသူငှာ အဆင်ပြေစွာလေ့လာနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ စုစည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်...
တစ်အုပ်ချင်းစီဒေါင်းယူနိုင်သလို 150MB စီ ခွဲ၍ Zip ဖိုင်လ်လိုက်လည်းဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။
ဖိုင်လ်ဆိုက်ဒ် ပမာဏကတော့ 1.5GB ရှိပါတယ်..။
ပြန်လည်မျှဝေချင်တယ်ဆိုရင် လွတ်လပ်စွာ မျှဝေနိုင်ပါတယ် (Credit မလိုပါ)
Adobe PhotoShop 7.0.pdf
Adobe Photoshop CS Tools များကြောင်းလေ့လာခြင်း....pdf
Adobe Photoshop CS4 အခြေခံ လေ့ကျင့်မှုများ.pdf
Adobe Photoshop Every Tool Explained.pdf
Adobe PhotoShop Keyboard Shortcuts PC.pdf
Adobe PhotoShop Web Designer Guide.pdf
Adobe PhotoShop မြန်မာမိသားစု ဖိုရမ်.pdf
Adobe-အဓိက သော့ချက်များ (1).pdf
Android Device Technology Guide By Than Htike (Shwe Yate).pdf
Android Users Gide Chaut.pdf
Android ဖုန်းရဲ့ လျှို့ဝှက် ကုဒ်များ.pdf
AutoCAD3 သင်တန်း 10 နှစ်ဖြည့် အထိမ်းအမှတ်.pdf
Basic English Grammar Book.pdf
Beginners Guide To Networt.pdf
Complete Networkm Guide ဦးဇော်လင်း.pdf
Computer Lessons For High School Vol-1 By U Zaw Lin (Youth).pdf
Application များအကြောင်း နားလည်သဘောပေါက်စေရန်.pdf
Group Policy ဖေါ်၊ဖျောက်ခြင်း.pdf
linux commands 2.pdf
linux Killingaprocess.pdf
Linux ကိုစတင်လေ့လာမည့် သူများအတွက်.pdf
Local Disk CD ကို Double-Click ဖြင့် ပုံမှန်အတိုင်း ဖွင့်မရပါက.pdf
Run Box ကို ဖေါ်ခြင်း ၊ ဖျောက်ခြင်း.pdf
Shutdown လုပ်သည့်ကြာချိန်ကို လျှော့ချခြင်း.pdf
Task Manager ဖေါ်၊ဖျောက်ခြင်း.pdf
Windows အတက်မြန်စေရန် မသုံးတဲ့ Program တွေကို ဖယ်ထုတ်ရအောင်.pdf
အသုံးများသော Run Command များ.pdf
အရေးကြီးသော Drive ကိုဖျောက်နည်း.pdf
Excel 2010 အသုံးပြုနည်း.pdf
facebook အသုံးပြုနည်း မိုးကောင်းကင် ဖောင်းပြင်.pdf
Firewall အကြောင်း သိကောင်းစရာများ.pdf
Flash Song ပြုလုပ်ပုံ.pdf
flash Video ပြုလုပ်ပုံ.pdf
Front page ရေးသားနည်း.pdf
gmail ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေ.pdf
google app stransition guide.pdf
Google Apps email.pdf
GPSနဲ့GPRS မိုးကောင်းကင် ဖောင်းပြင်.pdf
guide-burmese internet pass.pdf
Honest Hacking ရိုးသားစွာ ထိုးထွင်းလေ့လာခြင်း.pdf
How to mdade pdf စာအုပ်ဘယ်လိုထုတ်မလဲ.pdf
html ရေးသားပုံ မိတ်ဆက်.pdf
idevice အသုံးပြုနည်း အမျိုးမျိုး.pdf
IndesignCS3 တပ်မတော်သုံး ကွန်ပျူတာ လက်စွဲ.pdf
Internet Website လမ်းညွန်.pdf
Introducing Windows Server 2003.pdf
iPhone UnLock ပြုလုပ်နည်း.pdf
Joomla ၀က်ဆိုက်အတွက် အခြေခံပြင်ဆင်မှုများ.pdf
lead Gui tar လိဂ်ဂစ်တာတီးနည်း.pdf
Learning CSS (1).pdf
Microsoft Access 2002 အသုံးပြုနည်း.pdf
Microsoft Excel 2002 အသုံးပြုနည်း.pdf
Microsoft Word 2002 အသုံးပြုနည်း.pdf
Microsoft_Office_2010 English အသုံးပြုနည်း.pdf
Moble Devices မိုဘိုင်းအကြောင်းသိကောင်းစရာများ.pdf
MP3 MP4 ပြုလုပ်နည်း.pdf
Nero 8 နှင့် ခွေထုတ်နည်း.pdf
Networkဖြင့် ဖိုင်များကို ရှယ်ယာပေး မျှဝေသုံးစွဲနည်း.pdf
Page Insights Guide ဖေ့ဘုတ်.pdf
PageMaker 7.0 အသုံးပြုနည်း.pdf
Pages Overview ဖေ့ဘုတ်.pdf
Phone Crack ငွေဖြည့်ကဒ်ကို ဟက်မယ်.pdf
Power Director အသုံပြုနည်း.pdf
power point တပ်မတော်သုံး ကွန်ပျူတာလက်စွဲ.pdf
Remove Ubuntu Menu Window Atat.pdf
SQL Injection Attack နည်းပညာ.pdf
stepup Nation website.pdf
The Myanmars Android.pdf
Ubuntu 13.04 Beginner Guide.pdf
Understanding IPv4 or Approaching to IPv4.pdf
Uploading and Downloading.pdf
War Bot တည်ဆောက်နည်း.pdf
Web Desing လက်တွေ့ သင်ခန်းစာများ.pdf
Web development bestpractices.pdf
Win 8Virtual Box.pdf
Window vista Installation.pdf
Window xp Installation.pdf
windows7File sharing.pdf
Windows7တင်နည်း.pdf
Windows7အသုံးပြုနည်း.pdf
Windows 98 အကြောင်း သိကောင်းစရာ.pdf
Windows Registry by Sai Kyaw Swar Wai.pdf
Wireless Communications &.pdf
Word 2007_ အသုံးပြုနည်း.pdf
Word 2010_ အသုံးပြုနည်း.pdf
Zawgyi font ဖြင့် Virus ကာကွယ်နည်း .pdf
ကွန်ပျူတာ သုံးစွဲသူတိုင်းအတွက် အင်္ဂလိပ်စာ.pdf
ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ တိုလီမုတ်စများ မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်.pdf
ကွန်ပျူတာဖြင့် ဗွီဒီယို တည်းဖြတ် Premiere.pdf
မိုဘိုင်းမျိုးစုံ Root လုပ်နည်းနှင့် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ .pdf
မျိုးသူရ နေ့စဉ်သုံး အင်တာနက်.pdf
မြန်မာ unicode အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန် ohnthar.pdf
ရာမည ဖိုးလပြည့် အိမ်သုံး Proxy.pdf
သန်းထိုက် ရွှေရိပ် ကွန်ပျူတာ ရောဂါများ ကာကွယ်ဆေး.pdf
ဟက်ကာ အဂ်လိပ်လို The Hacker.pdf
အင်တာနက် သုံးစွဲသူများအတွက် အသိပေးချက် (၈) ချက်.pdf
အင်တာနက် ကော်နက်ရှင် ရှယ်ယာ.pdf
အင်တာနက် နှင့် ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုနည်း.pdf
အဆင့်မြင့် အင်တာနက် အသုံးပြုနည်း.pdf
အခြေခံ Hacking စာအုပ်.pdf
အခြေခံ ဂရပ်ဖစ် အနုပညာ.pdf
နေ့စဉ်သုံး အင်တာနက် Myo Thura.pdf
All For Linux Ubuntu KznT.pdf
Android on Ubuntu(KyawSwaHtoon).pdf
Linux For All အရမ်းကို ပြည့်စုံပါတယ်.pdf
JAVA_Programming _ =[ www.winkabarkyaw.net ]=.pdf
အပေါ်ကစာအုပ်တွေကို Zip ဖိုင်လ်လိုက် ဒေါင်းချင်သူများ ဒီမှာ ဒေါင်းပါ 150MB စီ ခွဲတင်ပေးထားပါတယ်။
All in One Ebook Part01
All in One Ebook Part02
All in One Ebook Part03
All in One Ebook Part04
All in One Ebook Part05
All in One Ebook Part06.
All in One Ebook Part07
All in One Ebook Part08
All in One Ebook Part09
Part 01 ကနေ Part9ထိ အားလုံး ဒေါင်းယူပြီး Folder တစ်ခုထဲမှာထား၍ Zip ဖိုင်လ်ကို WinRAR (Or) 7Zip နှင့် Right Click > Extract Here နဲ့ ဖြည်ချလိုက်ပါ...။
ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ စာအုပ်တွေကို အားတာနဲ့ ဆက်လက် တင်ပေးသွားပါမယ်..
Posted by dawallay lay at 6:24:00 PM No comments:
สอนการสร้าง Template Joomla ด้วย Artisteer4ง่ายม...
Water Fruit PhotoManipulation | Orange (click3d)
วิธีแก้ปัญหาติดตั้ง Windows บน dynamic disk ไม่ได้...
How to use - Windows7Boot updater
ဖောင့်ဒီဇိုင်းများ ကွန်ပျူတာအတွက် အဆင်ပြေအောင် တစ်...
မားသားဘုတ်ရွှေးနည်း วิธีการเลือก Mainboard, Z170 H1...
Dropbox ကိုသုံးပြီး ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ လက်တော့ တစ်ခ...
အင်တာနက်ဒေါင်းလော့ခ်မန်နေဂျာက Serial ကီးတောင်းနေသလ...
LET PLAY GTA V ตอนที่ 1 : ยินดีต้อนรับสู่เมือง Los...
မင်္ဂလာပါ ဒီတစ်ခါကျွန်တော်Hardwareပိုင်းနဲ့ သက်ဆို...
Post by Kaung Htoo San: iDevice များအား iCloud ရှိ...
iPhone Safari ကနေ ၀က်ဆိုဒ်တွေကြည့်တဲ့အခါ မြန်မာလို...
ဘာသာစကားအမျိုးပေါင်း ၉၀ကို မြန်မာလိုဘာသာပြန်ပေးနိ...
ကွန်ပျူတာ desktop ပေါ်တွင် ဗွီဒီယို Record လုပ်မယ် ...
system font ကိုချိန်းချင်သူများအတွက်...